पुजाआजामा चामलको प्रयोग किन गरिन्छ थाहा छ तपाईलाई । विवाहदेखि अन्त्येष्ठीसम्म चामलको प्रयोग गरिन्छ ।
पूजा पाठको अभिन्न हिस्सा भनेको चामल अर्थात् अक्षता हो । अक्षता बिना, निधारमा लगाइएको टिका पनि अपूर्ण हुन्छ । पूजाको संकल्पदेखि दक्षिणाको टिकासम्म सबै ठाउँमा अक्षताको प्रयोग आवश्यक छ । त्यसोभए, हाम्रो संस्कृतिमा अक्षतालाई किन यति धेरै महत्व दिइन्छ ? किन सबै पूजाहरू ती बिना अपूर्ण मानिन्छ ? विवाहको समयमा दुलहा दुलहीमाथि किन अक्षता फ्याँकिन्छ ?
चामल वा धान, लक्ष्मीलाई धेरै मनपर्दछ । चामल समृद्धिको प्रतीक हो, त्यसैले तिनीहरूलाई धान भनिन्छ । धान जो धन उत्पन्न गर्दछ । धानको बारेमा सबै चीज अद्वितीय छ, यसका सबै गुणहरू यस्ता छन् कि यसले पूजाको लागि योग्य बनाउँदछ ।
जब कुनै व्यक्तिको निधारमा टिका लगाईन्छ, यो सम्मान र ख्यातिको प्रतीक मानिन्छ । चालमको अक्षता प्रयोग गर्नु भनेको उमेरसँगै यसको ख्याति र सम्मान पनि लामो हुन्छ भन्ने विश्वास रहि आएको छ । पुजामा अक्षता पनि यही कारणले प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
यसको रंग सेतो छ, सेतो सत्यको प्रतीक हो, शान्तिको रंग हो । अक्षता सत्य भावले परमात्मालाई समर्पित गर्दछौँ । हाम्रो जीवनमा शान्ति आउँछ भन्ने भावनाको लागि हामी अक्षत पूजामा प्रस्ताव गर्दछौं । अक्षताले शितलता प्रदान गर्दछ । त्यसैले हवन, यज्ञ आदि द्वारा उत्पन्न गर्मी चिसो गर्नको लागि अक्षता अर्पण गरिन्छ । अक्षता धन, आयु, शान्ति, सत्य र शीतलता । यी पाँच कारणहरूले गर्दा अक्षतालाई पूजामा राख्ने गरिन्छ ।
मृत्युपछि पितृलाई गरिने पितृतर्पण पनि चामलकै हुन्छ । यसको पछि यो मान्यता रहेको छ की चामलबाट पितृलाई तृप्ति मिल्छ, साथै लामो समयसम्म सन्तुष्टि पनि प्रदान गर्दछ । पितृलाई सदगत तथा मोक्षतर्फ लैजान्छ भन्ने विश्वास पनि रहेको पाइन्छ ।
काठामाडौं - चर्चित सोसल मिडिया फेसबुकले सर्वोच्च अदालत गठन गर्ने…